🥇 ▷ Apple: iPhone 11 ayaa la shaacin doonaa 10-ka Sebtember ✅
Apple: iPhone 11 ayaa la shaacin doonaa 10-ka Sebtember
Faahfaahinta ku saabsan iPhone soo socda ayaa laga yaabaa inay dhammaato goor dhow. 10-ka Sebtembar waxay noqon doontaa mid ka mid ah Dhacdooyinka Gaarka ah ee Apple ayaa dhici doonta, halkaas oo lagu soo bandhigi doono qalabka cusub.
Cusub Moodooyinka iPhone si aad ah ayaa loo sugayaa sanad walba. Marka loo eego, waxaa jira taxane dhan oo xanta iyo daadinta ah, kuwaas oo ku saabsan aaladaha ugu dambeeyay ee Apple wareego. Sida ku xusan iPhone 11 wuxuu suuqa imaan doonaa seddex nooc. Kuwaani waxaa loo yaqaan iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max iyo iPhone 11 XR, laakiin ilaa iyo hadda ma jiro xaqiijin rasmi ah. Tani waxay u badan tahay inay isbeddelaan 10-ka Sebtember. Hadda waxay u dirtay Casuumaad Apple mid ka mid ah Dhacdooyinka Gaarka ah ee Apple, kaasoo dhici doona waxyar ka dib IFA. Marka lagu daro moodooyinka cusub ee iPhone, ku dhawaaqista Apple Watch cusub ayaa la filayaa.
Dhacdadii Apple ee Cupertino
“Hal abuurnimo kaliya” ayaa ah casuumada loogu talagalay munaasabada munaasabad ka socota Tiyaatarka Steve Jobs Sebtember 10 saacaddu markay tahay 19 saac Jarmalka, qoriga bilowga ayaa la siiyaa, dhacdada waxaa sidoo kale lagu raaci karaa kombuyutarka guriga hortiisa ee tooska ah. Gaar ahaan kaameeraha cusub ee iPhone waxay u badan tahay inuu diirada saarayo dhacdada, Apple sanadkan waxay u badan tahay inay ku tiirsan tahay sedex dareemeyaal kamarado ah oo naqshad cusub ah. Xitaa macruufka 13 iyo iPad OS waxaa laga yaabaa in si muuqata loo muujiyo.
Sidoo kale, furitaanka suuqa ee aaladaha cusub ayaa si rajo leh lagu shaacin doonaa, halka ballanta 20-ka Sebtembar ay durba hubaal tahay. Intaa waxaa sii dheer, ogeysiisyada iPads-ka cusubi waa si kasta oo ay yihiin MacBook Pro oo leh 16-inji qolka ku jira, laakiin waxay u wareegi karaan fure kale xilliga dayrta.
Inbadan oo ku saabsan: iPhone, Ritaac iPhone, Cusboonaysiinta iPhone, iOS 13